Collabora Vagadziri Vakatangisa Nyowani Gallium Controller yeMesa | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura Vagadziri veCollabora vakaburitswa kuburikidza neye blog positi, iyo nyowani Gallium controller yeMesa, iyo inoshandisa yepakati nepakati kuronga OpenCL 1.2 uye OpenGL 3.3 API nezve vatyairi vane DirectX 12 (D3D12) rutsigiro uye kuti yavo kodhi kodhi inosunungurwa pasi peMIT rezinesi.
Anotarisirwa controller achaita inokutendera iwe kushandisa Mesa pane zvishandiso izvo zvisiri kutanga zvinowirirana neOpenCL uye OpenGL uye zvakare sekutanga chinzvimbo chengarava OpenGL / OpenCL kunyorera kuti ushande paD3D12. Kune vagadziri veGPU, iyo subsystem inobvumidza kupa rutsigiro rweOverCL neOpenGL, nemadhiraivha anotsigira chete D3D12.
Mune yavo blog post, ivo vanogovana vanogovana:
Kwemwedzi mishoma yapfuura, tanga tichishanda pamapurojekiti maviri anonakidza kuCollabora, uye inguva yekupedzisira yekugovana ruzivo nezvazvo nenyika ...
Yezvirongwa zvekukurumidza, inocherechedzwa kuzadzikiswa kwekubvumidzwa kwakakwana kwemiyedzo ye OpenCL 1.2 uye OpenGL 3.3 rutsigiro, kuongororwa kwehukama nemashandisirwo uye kuiswa kweakanakisa maitiro mune yakakosha meseji yeMesa.
Nezve new controller
Iko kukura kweye nyowani controller kunoitwa pamwe chete neMicrosoft mainjiniya kugadzira maturusi eD3D11On12 kuD3D11 makiti ekuchinjisa uye D3D12 D3D12TranslationLayer raibhurari, pamwe neyakajairwa graphical echinyakare zvishandiso pamusoro peD3D12.
Kuitwa inosanganisira mutyairi weGallium, OpenCL compiler, iyo OpenCL yekumhanyisa nguva, uye iyo NIR-to-DXIL shader compiler, iyo inoshandura iyo yepakati inomiririra yeNIR shader inoshandiswa muMesa kune yakasarudzika DXIL fomati (DirectX yepakati mutauro), inoenderana neDirectX 12 uye yakavakirwa padiki kodhi LLVM 3.7 (Microsoft's DirectX Shader Compiler inonyanya kuwanda forogo yeLLVM 3.7). Iyo OpenCL compiler yakagadzirirwa kubva pachiitiko cheiyo LLVM chirongwa uye iyo SPIRV-LLVM toolkit.
Iri basa rinovaka pane akawanda apfuura mabasa. Chekutanga pane zvese, isu tiri kuvaka izvi tichishandisa Mesa 3D, neGallium interface sehwaro hweiyo OpenGL dura uye NIR sehwaro hweiyo OpenCL compiler. Tiri kushandisa zvakare LLVM uye Khronos SPIRV-LLVM muturikiri semubatanidzwa.
Pamusoro pezvo, isu tiri kuburitsa ruzivo rweMicrosoft mukugadzira yavo D3D12 dhairekitori, pamwe neyedu ruzivo mukugadzira Zink.
Iyo OpenCL kodhi kodhi inorongedzwa neyakaumbirwa mukati mepakati LLVM pseudocode (LLVM IR), iyo inoshandurwa kuita chimiro chepakati cheiyo OpenCL kernel mune iyo SPIR-V fomati.
Iwo macores mune anomiririra SPIR-V anoendeswa kuMesa, inoshandurwa kuNIR fomati, yakagadzirirwa, uye kuendeswa kuNIR-ku-DXIL kuti ibudise yakakodzera DXIL computational shaders yekuitwa kweGPU uchishandisa DirectX 12 yakavakirwa nguva yekumhanya. Panzvimbo pekushandisa Clover muOpenCL Mesa Implementation, nguva nyowani yeOverCL inorongwa, iyo inobvumidza kutendeuka kwakananga kuDirectX 12 API.
OpenCL uye OpenGL madhiraivha akagadzirirwa vachishandisa iyo Gallium interface yakapihwa muMesa, iyo inobvumidza kupfuura OpenGL yakatarwa paunenge uchigadzira madhiraivha uye kududzira OpenGL kufona muzvinhu zviri padyo nemifananidzo yekutanga iyo maGPU anhasi anoshanda pairi.
Mutyairi weGallium anotambira OpenGL mirairo uye nekutora chikamu kwemuturikiri weNIR-to-DXIL, anovaka mabhaundari ekuraira anomhanya paGPU achishandisa mutyairi weD3D12.
Pakupedzisira, vanogadzira vanotaura kuti iri ibasa rekutanga uye ivo vanotarisira kuti mutungamiriri avandudze nekufamba kwenguva:
Ichi chingori chiziviso, uye basa rakawanda rasara kuti riitwe. Tine chimwe chinhu chinoshanda mune zvimwe zviitiko panguva ino, asi isu tiri kungotanga kukwenya pamusoro.
Chekutanga pane zvese, isu tinofanirwa kusvika padanho rezvinhu zvatiri kunanga. Zvinangwa zvedu panguva ino kupasa kuenzaniswa kwekuyedzwa kweOpenCL 1.2 uye OpenGL 3.3. Tine nzira refu yekufamba, asi nekushanda nesimba uye ziya, ndine chokwadi chekuti tichasvika ikoko.
Kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kutarisa iyo yekutanga noti mu chinotevera chinongedzo kana kune avo vanofarira kuongorora kodhi yekodhi vanogona kuzviita kubva pano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Collabora vagadziri vakaunza nyowani Gallium controller yeMesa
Yekutanga yekutarisa yeMicrosoft Defender ATP yeLinux yave kuwanikwa